Madaxweyne Deni oo ku wahana degmada Burtinle & xogta socdaalkiisa.
Puntlandtimes (Garoowe)-Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo wafti uu hoggaaminayo ayaa ku wajahan degmada Burtinle ee gobolka Nugaal, halkaaso oo uu u tegi doono howlo la xiriira mashaariic horumarineed.
Guud ahaan degmada Burtinle ee gobolka Nugaal ayaa waxaa ka socota qaban qaabada soo dhaweynta Madaxweynaha dawlada puntland oo ay wadaan madaxda degmada iyadoo Degmada Ka dhagax dhigaya mashaariic hormarineed.
Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa waxaa lafilayaa inuu dhagax dhigo dhismaha Jidka isku xira Jalam iyo Degmada Xarfo kaasi oo ay siweyn u wada sugayeen shacabka reer Puntland horayna dhowr jeer u fashilmay.
Dhanka kalena, madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa waxaa lafilayaa in mudada uu joogo Burtinle inuu kormeero dhismaha Wadada Caro kaabada ah ee Buurtinle iyo Buubi oo qaab isku Tashi Bulsho ah loo dhisayo
well done wixii wanaag waaxaa muteeysan amaan iyo duco anigu waxaan aad ku farxaan markaan kheer argo markaan dhiig muslim arkano waa naxaa Ilaahow canfarta iyo somalida dhigooda kala qabooji kordoorka berbera farax ayuu igaliya dekeeda berbera waa farax kale bosaso waa insha Allah waa dhismi xaamaar horomar yaan leeys xastin guul puntland hala tartamo yaan la isdilin dhiig isaleem yaan laisku tasjiic gelin somali kulu horomar
Aae maa MADAXWEYNENIMADA ‘ciyaarta’ laga daayo, DAWLADNIMADANA ‘falaadka’ laga daayo!!!
@ Hillaac adeer Madaxwaynimada ini fargaajo cayaarta haka daayo, Dani 3000 km oo amni barwaaqo iyo horumar ah oo 25 sano haykal dowladeed oo dhamaystiran leh ayuu hogaamiyaa waana wiil taagtay oo ini libaax sanka taabte ah. Halka ini fargaajo uu villa wardhiiglay ku dhex waashay shaqadiisuna noqotay gabadhii Ikraan ee ay dileen kooxdiisu siduu u duudsinlahaa. Hilaacow gobanimada iyo sharaftu waa u dhalasho , hogaaminta iyo wadaniyaduna waa u dhalasho iyo haybad. Waxaana aan cadayn uga dhigaya dalkan Somaliya isagoo ah dalka dunida ugu rajo fiican oo ay ka jidho dimiqraadiyad iyo dowladnimo hanaqaad ah uuna hogaaminayo hogaamiye aqoonyahan ah daacadna u ah dalkiisa iyo dadkiisa waa Dr Abdirashiid Ali Sharmaarke AHN ayaa kooxdii afwayne assassination ku dileen dalkiina afgambi kula wareegeen waxaana dhacay halaagii iyo hooguit Somali u horseeday halka ay maanta joogto iyo in 20 sano uu dalku dowladnimo ahaado. Mar kale waxaa rajadii Somaliya soo celiyay dowladnimadiinii ku celiyay villa wardhiigley AHN Madaxwayne Cabdullahi Yusuf Axmed, labo Madaxwayne oo ka danbeeyay waxay sii wadeen dowladnimadii somaliya nasiibdaro waxay dhacday markii uu dalkii gacanta u galay kooxdii haraadiga Afwayne ee wali aaminsan 21 kacaanka iyo in dadka la dilo lana cabsi galiyo, taasoo markale rajo xumo galisay dadka soomaaliyeed. Halkaa waxaa ka cad Dani iyo dirkiisu inay yihiin ahaayeena dhisayaal, barbaariyeyaal yaqaan sida dowladnimo loo hago taariikhda ayaana inoo sheegin, sida Puntland u egtahay ayaa inoo sheegin. Halka ini fargaajo dirkiisu yahay dumiyeyaal, qaxiyeyaal oo aysan nidaam dowladnimo waxba ka aqoon. Waxaana cadayn ah 21 kii sano ee afwayne iyo 4 tii sano ee ini fargaajo. History repeats itself.
Wiil Taleex says:
Waad la hadasha HILLAAC laba jeeble haddii uu wax fahmaayo. Laakiin waa dhagax dixeed oo dheguhu uma daloolaan ee ha ku daalin. Waa guddoomiyaga Cayayaanka Baraha Bulshada oo bishii 30$ Muqdisho looga soo tuuro.